Maitiro ekudzima zvachose ako mapikicha pane iPhone uye iCloud | IPhone nhau
Carmen rodriguez | | IPhone nhau, ICloud, iOS 8
Mushure mekubvunzana nehunyanzvi hwakasiyana, hazvigoneke kuziva kana iweMufananidzo wakadzimwa kubva ku iPhone wabviswa zvachose kana achiri muchinyorwa. Kiyi "Bvisa»Hazviiti kudzima chifananidzo zvachose kana nekukasira. Iyo inongoudza yako iPhone uye Apple's iCloud maseva izvo viga iyi faira kusvikira yanyorwa yeimwe data.
Dambudziko nderekuti kunyangwe iwe usingakwanise kuona iyi mifananidzo pane yako iPhone, scan yakadzika zvemuchina wako unogona kuzviwana. Nenzira imwecheteyo zvazviri Zvakaoma kutaura kana pikicha yabviswa muICloud, sezvo isu tisingazive mashandiro eApple maseva.
Kuti udzivise kusava nechokwadi uku iwe unogona kudzidza zvakadzama masisitimu erasure, heano mamwe matipi.
1 Delete kubva ku "Mifananidzo" kwete mu «Albums«
2 Delete mufananidzo kubva kune akagovaniswa mafoto
3 Delete backup mifananidzo
4 Iwe haugone kuita chero backup
5 Shandisa XNUMX-Nhanho Verification.
Delete kubva «Mifananidzo"kwete mukati"Albums«
Maumbirwo emifananidzo muiyo Mifananidzo app yakavakirwa pa Mifananidzo yekuchengetedza uye inotevera kuodha mukati Albums, Streaming, nezvimwe. Ichi ndicho chikonzero zvakakosha kuti tinzwisise izvozvo kwatinofanira kuidzima iri muMifananidzo.
Iwe hausi kuzoiona ichinyangarika nekukasira sezvo mufananidzo wakabviswa unogara mu «dhairekitoriZvichangobviswa", iri mu Albums, panguva Mazuva makumi matatu kusvikira yanyangarika zvakakwana, ichi ndicho chikonzero tichafanira ibvise ipapo zvakare.
Delete mufananidzo kubva kune akagovaniswa mafoto
Kuchenesa iwo mufananidzo muMifananidzo kuchiri kusiya iwo mafoto mune akagovaniswa maalbum aive navo. Kana iwe ukagovana pikicha yako nemumwe munhu mufananidzo wacho unochengetwa mugore shamwari kana mhuri kuti vaone. Hazvitore nzvimbo pane yako iCloud yekuchengetedza kunyangwe iwe uine 5.000 muganho wemufananidzo yakagovaniswa, kubva iyo iwe yaunobvunzwa kudzima chero kuisa zvimwe zvitsva.
Unogona kuona miganhu ye Photo Stream uye iCloud Photo Kugovana in the peji reapuro.
Delete backup mifananidzo
Kana yako iPhone ichiita backup kana uchidya munzvimbo ine WiFi, iyi kopi inosanganisira mifananidzo yose yechigadzirwa, muchidimbu, pikicha yakatorwa mwedzi wapfuura inogona kunge ichiri mukuchengetedza kweye terminal. Kana paine chero pikicha iyo yaunoda kudzima zvachose nekuti yaizotyora zvakavanzika zvako, enda pairi bvisa mabhakuki ekare.
Kuti udzime backup, tevera nzira: Zvirongwa > ICloud > Self Storage > Manage chengetedzowobva wasarudza chishandiso nemabuckups aungade kudzima.
Iwe unogona zvakare dzivirira mapikicha kuti asabatanidzwe mumakopi anotevera chengetedzo, bvisa iyi sarudzo.
Iwe haugone kuita chero backup
iCloud inogona kuve hombe zviwanikwa, asi semufananidzo wekugovana zviwanikwa hazvisi thorutamente zvakafanira. Nekuti dzinga iCloud syncing yemifananidzo, ingoenda ku Zvirongwa > ICloud > Mifananidzo uye bvisa ese masevhisi anoenderana negore.
Paunodzima iyo, iwe uchaona yambiro yekuti inobvisa iwo ekumhanyisa mafoto kubva ku iPhone yako, usazvidya moyo, ndizvo zvatiri kutsvaga.
Shandisa XNUMX-Nhanho Verification.
Izvo hazvina kuomarara zvachose, zviri nyore kushandisa uye zvinokurudzirwa zvachose Kana iwe uchida kuti ruzivo rwako rusawire mumaoko evamwe vanobiridzira vanokutengesa nemadhora mashoma kukambani inoshambadza, kana zvakatonyanya, kuti iwe upinde mudunhu rekubiridzira, kubiridzira kana chero mhosva ingafungidzirwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » ICloud » Maitiro ekudzima zvachose ako mapikicha pane iPhone uye iCloud
Ndima yekupedzisira "Activate maviri-nhanho ongororo" Ini handina kunzwisisa, unogona kunditsanangurira? Ini handizive kana yakaverengerwa mukopi / kunama 🙂
Ndine mafoto pane yangu IPhone 5 iyo yandakatora kare kare uye ini handiwane iyo marara icon yekudzima iwo, chii chandingafanira kuita kudzima iwo?
Mhoroi vakomana, mungandibatsira here?
Chandinoda kudzima mapikicha kubva pairi iPhone roll achiachengeta iwo muicloud uye nekudaro uine yakawanda yekuchengetedza pane iyo iPhone. Ndingazviite sei? Ndatenda
kugoverana zvisizvo akadaro
Ini handikwanise kudzima mapikicha futi. Ini handikwanise kutora marara pane mamwe mafoto kubva 2012. Wakagona sei kuadzima?
Pindura ku shareillusion
Mhoroi, ini ndoda kudzima mapikicha akaendeswa kune iyo iPhone kubva kune yangu komputa saka ini ndine yakawanda yekuchengetedza nzvimbo pane mbozhanhare. Ndatenda
Mhoro, husiku hwakanaka, ndapota, ndinoda kuti undibatsire nedambudziko randiinaro: Ndakateedzera mifananidzo kubva ku iphone yangu 5s kuenda kuPC yangu ndichishandisa nzira yakatemwa kuidzima kamwechete kubva pafoni yangu, uye vagadzira akateedzana emafaira kana maacon anoti local disk uye haandibvumidze kudzima Chii chandingaite kugadzirisa dambudziko iri, sezvo ndichifungidzira kuti mafaira aya anodya nzvimbo pane yangu mbozhanhare?
Pindura Jhon Jairo Jaramillo
Ndine matambudziko ne iPhone 5 ndine mamwe mafoto andinoda kudzima asi haandipe mukana wekudzima, kana ini ndichipinda kuburikidza nePC uye ini ndoda kuidzima, haina kunditendera kana haitenderi ini kutevedzera dzimwe nziyo
Mhoroi, ini ndinongoda kuziva kuti ndingaite sei kudzima mapikicha akaendeswa kubva kuacomputer yangu kuenda kune yangu iPhone, ini handiwane icon yekuadzima, ndingaite sei?
Mangwanani akanaka, ndinodzoreredza sei mapikicha andakabvisa mumifananidzo yakagovaniswa?
Ini ndinobvunza kuti ndinoita sei kuti ndiwanezve iwo mafoto
Kuti ini ndakabviswa mukubuda.
Kana paine mukana wekuvadzorera
Ndine matambudziko ne iPhone 5 ini ndine mamwe mafoto andinoda kudzima asi haandipe mukana wekudzima, pandinopinda kuburikidza nePC uye ini ndoda kuadzima, haanditenderi
Yuliet Mora Garcia akadaro
Ndinoda uye ivo vachandibatsira! Ndagadzira kopi yekuchengetedza kuburikidza neDrive, iyo izvozvi ini ndoda kuidzima uye handikwanise kuenderera mu gallery yangu pafoni yangu! Ndinoadzima kubva kuDrive uye haawonekwe asi anoramba achionekwa mune yangu gallery, chii chandingaite Ndakaedza muGoogle mapikicha ini ndinoabvisa iwo asi iwo akafanana iwo anoonekwa mune yangu gallery zvakare! Ndinoda rubatsiro ndapota !!! Shuwiro yakanaka
Pindura kuna Yuliet Mora García
MARIO MENDEZ GARCIA akadaro
Ini ndatoedza kudzima mapikicha angu mugore, ilcoud uye hapana chinobuda zvakare pane yangu iphon, ndaneta neizvi
Pindura kuna MARIO MENDEZ GARCIA
Theresa M. akadaro
Iko hakuna nzira yekudzima Yese mapikicha nemavhidhiyo eakarwiswa, kana uchinge waakopa pasi kune pc, kusunungura nzvimbo, kubva kuIcloud pachayo uye kubva kuIphone? Handigoni kuzvitenda!
Pindura Teresa M
Kuenzanisa Nexus 6 vs iPhone 6, vakatongerwa kutarisana
Iwe unogona ikozvino jailbreak iOS 8 kana iOS 8.1 nePangu8